WHITE HORSE HOTEL & APARTMENTS HARGEISA & BEENTA HADHWANAAGNEWS | Somaliland Post
Home Maqaallo WHITE HORSE HOTEL & APARTMENTS HARGEISA & BEENTA HADHWANAAGNEWS
Designka waxa la sameeyay 2017, dhismaha waxa la bilaabay June,2018 , xilkana waxa lay magcaabay April,2018. Madaxweynaha JSL, Mudane Muuse Biixi Cabdi, warqad qoraal ah ayaan ugu gudbiyay designka, qiimaha dismaha iyo halka ay lacagtu taallo. Waxaan ka helay ogolaansho . Markii seeska la jeexaayay ( size ) Abtigay Sheikh Axmed ayaa ku akhriyay quraan casharna wuu ku saydhay si aanay isha xun iyo xasadku ugu dhicin. Amarka ilaahay, dacaayadda Axmed Naasir Jibriil waxay isu rogtay xayaysiis b ( Free Publilcity ), ilaahay khayrkeeda ha nasiiyo.
Hadaba aniga oo ka faidaysanyaa xayaysiiskaas, waxa White Horse Hotel la furayaa Bisha Nov,2019, haddii alla idmo. Wuxuu caasimadda kusoo kordhin doona bilic iyo qurux. Wuxuu ka koobanyahay 2 bedroom flats, One bedroom Flats, VIP & Single Rooms, Meeting Halls, GYM & Sky-view Cafteria. Waxa dushiisa sare lagu rakibo doona TELESCOPES lagu daawado daruuraha, dayaxa, laxaha iyo meerayaasha Cirjeed, Arun, Docay, Raage iyo kuwo kale. Qorbajoogta oo aanay ku jirin qirinqiirku, waxa loo samayn doona qiimo dhimis khaas ah “ Especial Discount “ , Insha allaah. Wariye Axmed Naasir Jibriil waxa la siin doona VIP Room muddo 10 cisho, waxaana lagu soo dhawayn doona gacmo furan iyo dhoolo caddayn.
Muwaadin Cali Ibrahim Jama “ Baqdaadi”.